Akụkọ - Ngwa nke ihe ụfụfụ ígwè na ụgbọ okporo ígwè dị elu
Ngwa nke ihe ụfụfụ ígwè na ụgbọ okporo ígwè dị elu
A na-ejikarị ụfụfụ ọla eme ihe na ụlọ ọrụ ụgbọ ala maka mmetụta buffering nke ahụ ụgbọ ala na mbelata mkpọtụ na mkpuchi okpomọkụ nke ahụ ụgbọ ala na mgbidi nkebi.
Ọfụfụ ígwè nke sitere na oghere bụ ihe a na-emepụta nke ọma nke na-eme ka ọ dị elu, nke nwere ogbo dị ka porous nhazi site n'ime ruo n'èzí.Ntinye ụda sitere na elu n'ime ime ya na-eme ka obere eriri ikuku na ihe dị na pores na-ama jijiji, na site na esemokwu na nguzogide viscous, ike ụda na-agbanwe n'ime ike ọkụ ma tinye ya n'ime ya.
E jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ na-eme ka ụda na-ada ụda, ihe ndị na-emepụta ihe na-eme ka ọkpụkpụ na-egbuke egbuke nwere àgwà dị elu nke na-eme ka ụda dị elu n'ogo dị ala.Dị ka nhọrọ nke ọkpụrụkpụ nke oyi akwa ikuku, ọ na-egosi mmetụta dị mma nke na-eme ka ụda dị mma mgbe ọ na-agụnye ọtụtụ oghere dị ala.
A na-eji ya maka ntinye ụda nke igbe ụgbọ okporo ígwè dị elu, ọ bụghị nanị na ọ nwere ezigbo ụda ụda olu, kamakwa ọ na-arụ ọrụ nkwụsị nke ọma karịa ihe ndị polyester omenala, na-arụ ọrụ ike ike dị mma, ike dị elu, enweghị ọkụ, ma na-abawanye. nchekwa nke akụrụngwa njem;N'otu oge ahụ Ihe ndị dị n'igwe anaghị egbu egbu na ndị na-adịghị emerụ ahụ, ma na-adabere na ụkpụrụ nchebe gburugburu ebe obibi.